Egwuregwu Atọ Need Kwesịrị Iji Na-agba Ecommerce Azụmaahịa Gị nke Ọma | Martech Zone
Egwuregwu Atọ Need Kwesịrị Iji Na-agba Ecommerce Na-azụ Gị nke Ọma
Tọzdee, Disemba 18, 2018 Mọnde, Jenụwarị 27, 2020 Sarah Nwachukwu
E nwere ọtụtụ ndị na-ere ahịa ecommerce n'ebe ahụ - ị bụ otu n'ime ha. Are nọ n'ime ya ruo ogologo oge. Dị ka ndị dị otú a, ọ dị mkpa ka ị nwee ike ịsọ mpi kachasị mma nke ọtụtụ narị puku ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ugbu a na todayntanetị taa. Ma olee otu i si eme nke ahụ?
Ikwesiri igba mbọ hụ na webụsaịtị gị dị ka na-adọrọ adọrọ dị ka o kwere mee. Ọ bụrụ na emeghị nke ọma, ọ bụghị nwee nnukwu aha, Akara edemede gị pere mpe (ma ọ bụ buru ibu), akara ngosi gị na-agakọ na ndabere nke ụlọ ahịa gị n'ịntanetị, bọtịnụ igodo na-adị n'ọnọdụ na-adịghị mma (chee echiche ebe a na-achọ!), Ma ọ bụ ọ bụrụ na agba ndị ị họọrọ na weebụsaịtị gị mere anaghị arụ ọrụ nke ọma na ọdịbendị ị na-ere, mgbe ahụ ị ga-mkpa ichegharị echiche maka imewe gị. Nke ahụ bụ mmalite gị.
Ọ bụrụ na ụlọ ahịa ecommerce gị nwere a ọkachamara nwee mmetụta na ya, mgbe ahụ ịkwesịrị ileba anya na ngwaahịa ị na-ere. Ọ bụ ha na-amasị ndị sara mbara karịa ndị na-ege ntị, ka ị na-achọ ka otu ìgwè ndị ahịa kpọtụrụ aha karịa? Kedu ụzọ ọ bụla dị mma, mana ọ nwere ike imetụta ihe ịga nke ọma gị ma ọ bụrụ na ị naghị azụ ndị ahịa gị. Ọzọkwa, ihe ndị a dị oke mma, ka ha bụ mbubata dị ọnụ ala? Ọ bụrụ na ngwaahịa gị daa, yabụ na ị ga-ada.
Were a anya gị marketing. Kedu ka ị si ere ahịa gị? Kedu saịtị ị na-akpọsa na etu ịdị mma ndị ahụ dị? Ndi enye ada okụk fo anam n̄kpọ ke eti usụn̄? Jide n'aka na ị na-enweta nnukwu mkpu maka ego gị na mbọ gị dị ka o kwere mee.
Ọ bụrụ na nke ahụ niile na-arụ ọrụ, mgbe ahụ ọ bụ oge ịhazi azụmahịa gị. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla dị, ị nwere ike ịmalite ilele usoro na ọrụ gị n'otu n'otu iji melite ọrụ ndị ahịa, ọsọ ọsọ nke ọrụ, na nnweta ngwaahịa.
Iji nyere gị aka n'akụkụ ndị a nke azụmahịa gị, anyị na-atụle ụfọdụ ngwa kachasị mma ị nwere ike ijikwa ụlọ ahịa ecommerce gị.
The Google Analytics ngwa ga-enye gi onu ma uzo ahia ahia gi na ahia gi. Ngwa ahụ na-enye gị ohere ịdebe nleta weebụsaịtị gị. You pụrụ ịhụ ọnụ ọgụgụ nke echiche onye ọ bụla na peeji nke na-anata. Nwekwara ike ịhụ ọnụọgụ nke nleta ha na-agafe oge, na-ekpebi site na nzacha ị setịpụrụ na ngwa ahụ.
Ngwa a na-eme ka ị hụ ebe echiche si abịa. Imirikiti nke ndị ahịa gị nwere ike ịzụ ahịa na saịtị ecommerce gị na ofesi ma ị maghị ya. Hụ ndu ndị a ga - enyere gị aka ịgbanwe usoro azụmaahịa gị ma jikwaa ụlọ ahịa gị n'ịntanetị karịa maka ndị ahịa si mba ọzọ nwere mmasị ịzụrụ ngwaahịa gị.
Ọzọkwa, site n'ịhụ peeji ndị na-ere, ị nwere ike ịhụ ụdị ngwaahịa ndị ahịa gị na-azụ. Nke a ga - enye gị ohere ịmepụ ihe ọ bụla anaghị ere ma weta akara ngwaahịa ndị ahịa gị chọrọ.
Banye maka Google Analytics
Nke a bụ ihe magburu onwe ngwa! Adobe na ngwa agha aghaghị ịdabere n'ụdị ọdịnala ndị ọzọ nke ịnye ụlọ ahịa ha ngwaahịa: ha ga-ahụ ndị na-ere ahịa na-ebu ngwaahịa ha chọrọ iburu n'ụlọ ahịa ha, zụta ha n'ọtụtụ buru ibu iji nweta ọnụahịa ọnụahịa kacha mma (ma ọ bụ n'ihi na N'ogbe na-achọ a kacha nta iji size ga-ruru).
Ha ga-echere ka ngwaahịa a bịarute izu ole na ole. N'ihe banyere ndị na-ere ahịa ahịa dị ka Wal-Mart na Target, a ga-ebu ụzọ nyefee ihe ndị a na-ere ere na ebe nkesa tupu hazie, kwakọba maka ụlọ ahịa ọ bụla, wee ziga ha n'ụlọ ahịa dị iche iche.
Ndị na-ere ahịa Ecommerce ga-adabere na ndị na-ere ahịa ọdịnala maka ọtụtụ n'ime ngwaahịa ha. Mana oge na-agbanwe, na Oberlo na-enye obere, ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ụzọ ka mma iji ree ngwaahịa ha.
Kama ịzụta site n'aka onye na-ebubata ngwa ngwa, ịkwesighi ịtụ ihe - opekata mpe ruo mgbe onye ahịa nyere iwu. Oberlo na-enye gị ohere ibubata ngwaahịa sitere na ọtụtụ puku ndị na-eweta ngwaahịa ozugbo na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị. Mgbe ahụ, ị ​​ga-etinye iwu ndị ahịa na soplaya. Onye na-ebubata ya ga-atụba iwu ahụ n'ọnụ ụzọ ọnụahịa ndị ahịa.
Nke a bụ nnukwu mgbanwe maka mmekọrịta onye na-ere ahịa / azụmaahịa maka na onye na-ere ahịa agaghị akwụ ụgwọ maka nnukwu ngwaahịa. Ihe ahụ na-aga site n'aka onye na - azụ ahịa gaa na onye zụrụ ya.
Debanye aha na Free na Oberlo
Ahịa bụ otu n'ime ngwa kachasị mma maka gị Njikwa mmekọrịta ndị ahịa. Ngwa a na - enye gị ikike ịmeghachi okwu maka nsogbu ndị ahịa; ma ọ bụrụ na e nwere nsogbu na Filiks, gị ahịa ga-maa ka ị mara. Ngwa CRM a ga-ahapụ gị ka ị zaghachi nsogbu ndị ahụ, ma site n'echiche ndị ahịa na site n'echiche nke gị. Nwere ike ibido ndozi maka nsogbu ahụ ozugbo.
SalesforceIQ na - ejikọkwa ọwa mgbasa ozi ọhaneze gị niile n'otu usoro ntanetị. Nwere ike ịgakwuru ndị ọbịa gị nwere obi ụtọ ma soro ha na-emekọrịta ihe, na-ekele ha n'ụzọ niile mmadụ nwere ike ịhụ. I nwekwara ike soro ndi enyi na ndi enyi nke ndi ahia gi na emegharia ha n’ime ndi ahia ohuru. Site na ngwa CRM a, ị nwere ike iwepụta azụmaahịa a na-emegharị yana ịmalite ụzọ ọhụrụ a ga-esi enweta ego maka ụlọ ahịa ecommerce.
Site na ngwa ndị a, ị ga-enwe ike ijikwa azụmahịa gị nke ọma na nke ọma. Ga-enwe ike ịchekwa nhọrọ ngwaahịa gị yana ebuka ebe ị na-eji njikọta nke ndị na-ere ahịa na ndị na-ebubata ngwa ahịa ngwa ngwa.
Ga-enwe ike ijikwa mmekọrịta onye ahịa gị yana mmekọrịta gị, yana ịre ndị ọzọ ahịa. Salestụle ahịa site na ngwa ndị a ga-enyekwa gị ike ịmeghachi omume azụmaahịa n'oge, na-enye gị ohere ịbawanye ahịa n'otu ụbọchị ahụ.
Site na ngwa ndị a, ị ga-eme ka azụmaahịa gị rụọ ọrụ nke ọma na asọmpi.
Banye maka a Free SalesforceIQ Nnwale
Tags: ecommercesalesforce mkpa
Sarah Saker bụ onye nchịkwa azụmaahịa na onye edemede na-enweghị akwụkwọ na-ahụ maka inyere SMBs usoro nhazi maka nkwado ndị ahịa yana uto a na-ahụ anya. Mgbe ọ na-edeghị ma ọ bụ na-enye ọzụzụ, a ga-ahụ Sarah n'ugbo ezinụlọ ya (obere, mana na-eto eto!) Jikọọ na Sarah na banyere.me/ssaker maka nkuzi ma ọ bụ ederede enyemaka.
Wzọ 6 nke Social Signals Melite ogo
Etu esi ehichapụ ihe niile WordPress kwuru